Ihe ịzụta mmanụ sere na kwaaji: Top 20 ezi ihe nlereanya | Artist Oleg Soloviev
ebe obibi » ozi » Ihe ịzụta mmanụ sere na kwaaji: Top 20 ezi ihe nlereanya
foto, mmanụ eserese, Ọ dịwo mara - European nka malitere iji ndị na agba na 15 na narị afọ. Tupu nke a, ndị kasị bụ egg tempera. Oil ágbá n'ụzọ zuru okè weere, ha na-enye ha ohere na-arụ ọrụ nnọọ ogologo oge, enye ihe oyiyi a dị iche iche agwa. Ebe ọ bụ na oge ha na-otu nke kasị eji ngwaọrụ na-arụ ọrụ nke ndị nka.
Ebube na mepụtara nke mmanụ ágbá na-ekwukarị na na Dutch artist Van Eyck ụmụnna, ma e nwere ihe gosiri, na mmanụ-resin varnishes mee ugbua na 8 na narị afọ.
N'oge a artists-ebi technical egbu. n'ụzọ ziri ezi, mara mma gburu mmanụ sere pụrụ igosi dị iche iche nke mmetụta uche, olu na ịma mma, niile, na echiche nke onye na-ese. Ọ bụla n'ime ime ga-erite uru, ma ọ bụrụ na ọ bụ a kwaaji.
Oil sere na kwaaji agaghị nanị na-enwe a oké onyinye, ma nyere kwaaji ike amanye enye ihe ndabere maka ihe e kere eke nke ga-eme n'ọdịnihu collection. Ma obon art - ọ bụghị ụzọ dị mfe. Ebe mkpa ka ị esoro ụfọdụ Atụmatụ.
nke bụ isi ụkpụrụ nduzi maka nhọrọ nke eserese:
The isi ọrụ nke mkpoko - nke a bụ na-eche na mma nke ahọrọ ọrụ.
Ka anyị lee anya a nta zuru ezu na usoro obibia na nhọrọ nke eserese, mmanụ eserese.
Otu ụzọ bụ obibia obi. Gịnị ka ọ bụ? eziokwu, na bụla sere na iwu ji ya ime ka obi omume na ya onye nwe ya, na-ekiri, hụrụ ya, nwekwara mkpa ka ị na-eche ụfọdụ mmetụta uche, dabere na isiokwu okwu nke kwaaji. Esịtidem nghọta - ebe a bụ isi ihe, ekele nke inweta ihe osise na-abụghị nanị na-anakọta, ma ndị nkịtị na-.
Ihe dị mkpa zuo nke osise - ọ bụ a ụdị ego. Onye ọ bụla zụtara a masterpiece na afọ na-aghọ ihe dị oké ọnụ, amụba ya bara uru dị ka a mpempe ego.
Mgbe ị na-ahọrọ a picture, gaa na akaụntụ ndị na-esonụ:
Salvador Dali kwuru: "M wee hụ - na sunk n'ime mkpụrụ obi, na-egosipụta site na ahịhịa na kwaaji. eserese a. Na otu ihe - na ịhụnanya ". Ya mere, picture - nke a bụ nke mbụ na ugbu a onyinye. Ọbụna ndị ọkà mmụta sayensị nwere mụụrụ a ọnụ ọgụgụ nke ọmụmụ, chọpụta, dị ka a genre picture emetụta mmadụ psychological ala. Ihe ha hụrụ? Nti mmetụta uche ime ka oyiyi nke ọdịdị na ndi nsọ. Ihe ọzọ dị mkpa bụ na ihu igwe: anyanwụ na udo - na nwayọọ na juu, a oké mmiri ozuzo na ọjọọ ihu igwe - ọ bụ mwute mmetụta.
Olee otú ịhọrọ nri onyinye ke ndise?
Friends - gorodskoyilimorskoypeyzazh. onyinye, kotoryyvsegdabudetnapominatimsvoegodaritelya.
Ọzọ plus ịzụrụ osise - a mere na-amalite ịghọta ubi nke art. Ndị nwe nke mara mma canvases amalite anya iche iche mgbe ụwa gburugburu.
Chuvstvoprekrasnogo, vashvkusstanutboleetonkimi, aja.
Ma eleghị anya,, nachavizuchatistoriyuzhivopisi, interesuyasetoytemoy, vysamiprobuditevsebezhelanienachattvorit.
"Onye ọ bụla nke m picture kwesịrị ikwu ihe ọ bụla, dịkarịa ala bụghị n'ihi nke a ka m dee ha. " – kwuru Vasily Vereshchagin. Gbalịa na-agụ akwụkwọ ndị a, na gị ụwa ga-adị isi awọ na efu.